May 2020 – Kalfadhi
Muuse Suudi oo sheegay in ay adagtahay in lasoo helo dadkii ka dameeyay dilkii dhallinyaradda
May 31, 2020 Hassan Istiila
Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka hadlay dhallinyaradii lagu laayay deeggaanka Gololeey ayaa sheegay in uu aaminsanyahay in ay adagtahay sidii loo soo heli lahaa dadkii ka dambeeyay falkaasi. Waxaa uu xusay in dad u shaqeeya dowladda oo ka baqaya in shaqadda laga bixiyo lagama sugaayo baarinta dhacdadaasi. “Falkaan sida dadkii ka danbeeyay loo helo waa adag tahay.. Baaris badan ayaan galay waxaan la hadlay guddoomiyaha degmada, taliyaha ciidamada Booliska Balcad, Taliyaha Nabadsugidda iyo nin xildhibaan ah kulligood waa isla jireen, waana ka waayey nin wixii jira sheegi karo” ayuu…
May 30, 2020 May 30, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ee dalka Soomaaliya ayaa meesha ka saaray suurta-galnimada in la kordhin doono muddo xi-leedka Baarlamaanka iyo madaxweynaha. Siyaasiyiinta mucaaradka ee dalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa walaac xoog badan ka muujiyay in doorashada aaney xiligeeda ku dhicin kaddib markii muddo bil ah dib loo dhigay xiliga ay baarlamaanka hor imaan lahaayeen Guddiga Madaxbanaan ee Doorashoyinka Qaranka si looga dhagaysto warbixino la xiriira arimha doorashooyinka Qaranka. “Waxaan rabaa in hal qodob si fiican loo fahmo. Sharcigan doorashada waxaa loogu…
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo guddoomiyay shirka Golaha wasiirrada ee todobadkan ayaa sheegay iney laga maarmaan tahay iney doorashada xilligeeda ku qabsoonto, sida oo kalana doorashadu ay tahay sharciyadda ay ku joogaan oo xilalkana ay ku hayaan. Xasan Cali Kheyre ayaa ku baraarujiyay golaha wasiirada in howlaha ugu muhiin ee dowlada horyaalla ay yihiin doorashooyinka ayna ka qeyb-qaataan sidii loo qaban lahaa doorasho ku dhacdo si nabad ah. “Afartii sano waa in mar doorasho la galo, doorasho dadka intooda badan isla oggol yihiin saamileyda-siyaasadda badankood ama…
May 28, 2020 Hassan Istiila
Baarlamaankow Ciid wanaagsan. Waxaan maqlayaa in aad ku howlan tihiin qaabka ay doorasho u dhici doonto iyo goorta, qofkii Allah gaarsiiyo. Marka hore waan idinku bogaadinayaa in aad gudaneysaan waajibaadkiinna Dastuuriga ah. Marka xiga talooyinka aad rogrogeysaan, oo qaarkiin marka ay bannaanka joogaan aanay la gabmbaneyn, waxaan maqlayaa in ay ka mid tahay in aad kuraasta iska sii fadhidaan marka uu dhammaado xilligii la idiin doortay. Kuwa sidaas ku doodayaa kama xishoonayaan ee qiil ayayba ka dhiganayaan in ay ku fashilmeen in ay howlaha ayaga kaga beegan doorashada ay qabtaan…
May 27, 2020 May 27, 2020 Hassan Istiila
Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka Soomaaliya, ayaa lagu wadaa in 27-ka bisha June ay hor-yimadaan kulanka wada-jir ah ee labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, si looga dhagaysto warbixino la xiriira arrimha doorashooyinka Qaranka. 27-ka bishan May ayey aheyd in uu guddigu hor-yimaado Baarlamaanka balse furitaanka Kalfadhiga 7-aad ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira cudurka COVID-19. Guddiga Doorashooyinka, waxaa uu u baahanyahay in uu heysto ka hor inta uusan tagin Baarlamaanka sharciga axsaabta Siyaasadda, balse sharcigaasi wali ma uusan marin akhrintii 1-aad, waxaana uu hor yallaa Baarlaamnka. Sharciga axsaabta…
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ahna hoggaamiyaha Madasha Xisbiyada Sheekh Shariif Sheekh Ahmed, ayaa sheegay in uu aad uga xunyahay in guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya uu ku xad-gudbay Dastuurka KMG iyo Sharciga Doorashooyinka Qaranka. Baarlamaanka Soomaaliya ayuu ku eedeeyay in ay muddo bil ah dib-u-dhigeen hadal-jeedinta guddiga Doorashooyinka Qaranka. Mudane Shariif, ayaa ka digay isku day walba oo lagu kordhinayo muddo xileedka hay’adda Dastuuriga ee dalka Soomaaliya. Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa maalin ka hor shaaciyay in 27-ka bisha June loo yeeri doono Guddiga Madaxbanaan ee Doorashoyinka Qaranka…
May 26, 2020 May 26, 2020 Hassan Istiila
Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa shalay shaaciyay in 27-ka bisha June loo yeeri doono Guddiga Madaxbanaan ee Doorashoyinka Qaranka si looga dhagaysto warbixino la xiriira arimha doorashooyinka Qaranka. 27-ka bishan May ayey aheyd in uu guddigu hor-yimaado Baarlamaanka, si uu u soo bandhigo xilliga doorashada ay dhaceyso iyo nooca ay noqoneyso balse furitaanka Kalfadhiga ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira cudurka COVID-19. Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka xildhibaan C/qaadir Cosoble, ayaa ka hor-yimid qorshaha muddo kordhinta Guddiga Madaxa bannaan ee…
May 25, 2020 May 25, 2020 Hassan Istiila
Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa maanta shaaciyay in 6-dda bisha June uu furmi doono Kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka, kaddib shir ay ku yesheen xarunta Villa Hargeysa ee Mogadishu. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullahi, ayaa maanta si wada-jir ah u guddoomiyay shirka. Guddiga ayaa sidoo kale maanta shaaciyay in 27-ka bisha June loo yeeri doono Guddiga Madaxbanaan ee Doorashoyinka Qaranka si looga dhagaysto warbixino la xiriira arimha doorashooyinka Qaranka. Maxamed Cabdillaahi Xasan oo ah hab-dhawraha golaha shacabka ee Baarlamanka Soomaaliya,…
May 25, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in maanta magaalada Mogadishu ay ku kulmayaan Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya. Guddiga ayaa qodobada ay ka hadli doonaan waxaa kamid ah xilliga rasmiga ah ee uu furmayo Kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka iyo waqtiga Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashooyinka Qaran Xaliima Yareey ay hor imaan doonto Baarlamaanka. Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashooyinka Qaran Xaliima Yareey ayaa waxaa lagu waday in 27-ka bishan May ay hor-tagto Baarlamaanka, hayeeshee waxaa dib-u-dhigay xirnaanshaha Baarlamaanka sababo la xiriira cudurka COVID-19. Kulamada Baarlamaanka…
May 21, 2020 May 21, 2020 Hassan Istiila
Guddiga wada-jirka ah ee soo diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga Doorashooyinka Qaranka, ayaa shalay kulan la qaabtay guddoonka labada aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kulanka oo ka dhacay xarunta KMG ee golaha shacabka, ayaa guddoonka waxaa uu warbixin uga dhegeystay guddiga iyo shaqooyinkii ay soo qabteen tan iyo xiligii la magacaabay oo ay kamid yihiin kullamadii ay sameyeen, wada-tashiyaddii ay la qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo halka ay marsiinayaan sharciyadda ay gacanta ku hayaan. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullahi, ayaa…